गोरे सहित एसएसपी खत्री र गुरुङलाई काठमाडौं ल्याँइदै, सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा अनुसन्धान अघि बढाइने » खबरहरुको एउटै केन्द्र
गोरे सहित एसएसपी खत्री र गुरुङलाई काठमाडौं ल्याँइदै, सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा अनुसन्धान अघि बढाइने
सोमबार, जेष्ठ २८, २०७५ ११:४७ मा प्रकाशित !
काठमाडौँ । जिल्ला अदालत मोरङले ३८ क्वीन्टल सुन तस्करी तथा सनम शाक्य हत्या प्रकरणका मुख्य अभियुक्त चुडामणि उप्रेतीलाई काठमाडौं लैजान अनुमति दिइसकेको छ । जिल्ला अदालत मोरङको अनुमतिसँगै मुख्य अभियुक्त चुडामणिसहित अन्य तीन जनालाई सोमबार दिउँसो काठमाडौं ल्याइने भएको छ ।
चुडामणि उप्रेतीसँगै राप्रपा प्रजातान्त्रिकका नेता भुजुङ गुरुङ र एसएसपी श्याम खत्रीलाई काठमाडौं ल्याउन लागिएको हो । चुडामणि उप्रेती र भुजुङ गुरुङलाई जिल्ला कारागार, मोरङमा राखिएको थियो । त्यस्तै एसएसपी श्याम खत्रीलाई क्षेत्रीय कारागार, झुम्कामा राखिएको थियो ।
स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार सोमबार दिउँसो १२ः४५ बजेको फ्लाइटबाट उप्रेती, गुरुङ र खत्रीलाई ल्याइदैछ । काठमाडौंमा ल्याइसकेपछि यी तीनै जनालनई सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा अनुसन्धान अघि बढाउने तयारी रहेको छ ।
PREVIOUS POST Previous post: अस्पतालका प्रमुखलाई कालो मोसो
NEXT POST Next post: अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पसँगको वार्तामा यी हुन् किम जोङ उनका एजेण्डा
बस दुर्घटना, एकको मृत्यु, आधा दर्जन बढी घाइते सोमबार, जेष्ठ २८, २०७५ ११:४७
प्रधानन्यायाधीशमा चोलेन्द्रशमशेर जबराको नाम सिफारिस सोमबार, जेष्ठ २८, २०७५ ११:४७
नेकपाले न्यूरोडमा लगायो डोजर, यस्ता छन् ६ कारण सोमबार, जेष्ठ २८, २०७५ ११:४७
निर्वाचित रेशमलाई जेल कोचेर ठूलो अन्याय : नेतृ हिसिला यमी सोमबार, जेष्ठ २८, २०७५ ११:४७
निर्मला हत्या प्रकरणः प्रदीप-विशाल पनि दिलिपजस्तै ‘नक्कली’ अभियुक्त ? सोमबार, जेष्ठ २८, २०७५ ११:४७